Yini ongayibona eBali | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Bali, Yini ongayibona
Enye yezindawo zokuvakasha ezidume kakhulu nezidumile emhlabeni yi isiqhingi se-bali. Uma sikhuluma ngobuhle, amabhishi, i-exoticism yase-Asia, khona-ke uBali uphakamisa uhlu ekucabangeni ngezindawo ongazifinyelela.
IBali ingeka- Indonesia futhi cishe u-80% womnotho wawo usekelwe kwezokuvakasha ngakho-ke namuhla, sizobona ongakubona eBali. Ngabe ilele nje elangeni futhi ibhukuda emanzini afudumele noma kukhona okungaphezulu kakhulu?
2 Yini ongayibona eBali
Njengoba sishilo, IBali yisifundazwe sase-Indonesia kanti inhlokodolobha iDenpasar. Kungeqembu leZiqhingi ze-Lesser Sunda kanti inani labantu ikakhulukazi amaHindu. Isiqhingi esisodwa eziphilayo yinhle futhi lokho kungenxa yokuthi iyingxenye yendawo eyaziwa njenge Unxantathu weCoral, icebe kasikhombisa kune-coral esingayithola, ngokwesibonelo, oLwandle lweCaribbean.
IBali ingaphezudlwana kwamakhilomitha amathathu ukusuka eJava, inezintaba ezingamamitha acishe abe ngu-2 XNUMX ukuphakama, izintaba-mlilo ezisebenzayo, imifula, izixhobo zamakhorali nesimo sezulu esiseduze 30 ºC unyaka wonke nomswakama ophakeme kakhulu. Umphumela? Kushisa kakhulu. Njalo noma cishe njalo.
Ngalesi simo sezulu lapho isikhathi semvula. Phakathi kuka-Okthoba no-Ephreli noDisemba noMashi, ngakho-ke ungacabangi nangokuya ngalezi zinsuku.
Isiqhingi saseBali sincaneKungamakhilomitha ayi-140 ngama-80 kuphela, phakathi kweJava neLombock. Kuyisiqhingi sentaba-mlilo esinamathafa amahle nezindawo ezivundile futhi indawo ephakeme kakhulu yiNtaba i-Agung. Lesi siqhingi sihlala abantu abayizigidi ezimbili nohhafu ngakho-ke bakhona inani eliphakeme labantu.
I-Bali iyinhlanganisela ephelele yamathafa nemicimbi ukuze ube yindawo oya kuyo umndeni, indawo engcwele yokomoya, ipharadesi lomhloli, indawo ye foodies kanye nama-surfers nemibhangqwana ye-caramel. Ake siqale ukuthi kungani izindawo esingazazi eBali.
Uma unesithakazelo enkolweni efakwe esimweni esihle kakhulu lapho uya khona Ithempeli laseTanah Lot. Yithempeli lamaHindu elakhiwe edwaleni elihlala ezitebhisini ezisuka ogwini ngakho-ke liyikhadi leposi elijwayeleke kakhulu esiqhingini. Uwuthola ngamakhilomitha angama-20 enyakatho-ntshonalanga yedolobha laseDempasar futhi usukela kuwo Ikhulu XVI.
Elinye ithempeli elihle yi Ithempeli le-Ulun Danu, eyakhelwe ogwini lweLake Baratan, eBegedul. Lesi sakhiwo sihle futhi sinikezelwe kunkulunkulukazi wechibi. Yindawo ethulile futhi ethulile. Futhi ekugcineni, ukuqedela ukuvakashelwa kwamasayithi okumenyezelwe yi-UNESCO Amagugu Omhlaba sineJatiluwih: amasimu we-paddys ukuphupha.
Imifino Amasimu erayisi aseJatiluwih, ezizungezwe izihlahla zesundu, zifanelwe izithombe eziningi. Kungumuzwa omuhle ukuhamba phakathi kwabo futhi empeleni lokho kusho igama elifanayo: Jati y luwiNgokubambisana asho kahle impela. Le ndawo isenyakatho nesifunda saseThabanan, amamitha ayi-800 ngaphezulu kogu lolwandle, cishe amakhilomitha angama-48 ukusuka eDenpasar nama-29 ukusuka eTabanan. Ungakhohlwa oxoshiwe!
Mayelana nokuxhumana nemvelo ungavakashela i- Ihlathi Lemfene nesakhiwo sakhe samaHindu e-Ubud. Lesi sakhiwo sihlala ezinkawini ezingaba ngu-500 futhi kunamathempeli amathathu asemi kusukela ngekhulu le-XNUMX. Namuhla yonke indawo iyindawo yokulondolozwa kwemvelo futhi bayakuvumela ukuthi wondle ubhanana ezilwaneni. Ungaya futhi ku- ITirta Empul, isakhiwo sethempeli engaphandle nje kwe-Ubud futhi enamachibi amaningi anamanzi avela ezintabeni.
Ngokuqondile, uma ubonile i-movie noJulia Roberts, Yidla, Thandaza noThando, ungahle ukhumbule le sayithi. Amanzi kuthiwa angcwele kuwo wonke amaHindu. Noma ngubani angageza kuzo ngakho-ke ujoyine!
Khuphuka iNtaba iBatur futhi kungaba uhambo oluhle. Ingamamitha ayi-1700 ukuphakama futhi ingenye yezintaba-mlilo ezaziwa kakhulu eBali. Ukuvakasha okuhlelekile kuvame ukuqala kusenesikhathi, cishe ngo-4 ekuseni, ngakho-ke lungela. I- ukubuka kwelanga Kusuka esiqongweni salo muhle, ikakhulukazi uma kubhekwa ukuthi kukhona ichibi elizungeze intaba futhi okuwela kulo ilanga lokuqala lasekuseni.
Ukuqhubeka nemisebenzi okufanele siyenze ehlobene nohlobo lweBali singakhuluma nge i-rafting emfuleni i-Ayung. Kuhlanganiswe nokuhamba emadolobhaneni amahle asogwini lomfula kanye nehlathi eliluhlaza eliluhlaza elihambisana nokudlula kwamanzi. Emisebenzini emanzini athambile indawo okufanele iye kuyo kufanele, ISanur: ukuntweza, ukubhoboza iparagliding nokugwedla. I- kuta lolwandle ibuye ihehe ama-surfers avela kuwo wonke umhlaba. Kweminye imidlalo yezemidlalo zama UTanjung benoa: i-jetpack yamanzi, isibonelo.
Uma ukuntywila kuyinto yakho, unga ungene phansi umkhumbi eTulambenLapha ngemuva kulele i-USAT Liberty eyacwila eMpini Yesibili Yomhlaba kanye nenye yezindawo zokuntywila ezidume kakhulu emhlabeni. Enye indawo ongangena kuyo Padang bai, empumalanga yeBali futhi unezindawo eziyisikhombisa ezahlukahlukene ongazivakashela ezivela ogwini. Futhi omunye unjalo U-Amed, indawo engaziwa kakhulu enokubonakala okuhle kakhulu namathuba okushibilika kancane.
Phakathi kwezinye izinto ongazenza noma ozibona eBali ukuvakashela i- I-Bali Zoo, indawo engcono kakhulu yokuhlangana nezilwane zaseNingizimu-mpumalanga Asia ezinamahlosi, obhejane, izindlovu nezinyoni ezimibalabala. Enye indawo enezilwane i- IBali Marine neSafari Park. Ungavakashela futhi i- I-Chocolate Pod Factory. I-Indonesia ingomunye wabakhiqizi be-cocoa abakhulu kunabo bonke emhlabeni futhi ushokoledi omuhle wenziwa lapha, kanye nokufunda ngokuthi ubhontshisi utshalwa futhi ucutshungulwe kanjani.
Sishilo ekuqaleni ukuthi iBali ineziqhingi ezithile eziseduze ngakho ukubazi nakho kungaba yingxenye yohambo lwakho. Isibonelo, unga chitha usuku esiqhingini saseMenjangan, enyakatho-ntshonalanga yeBali. Lapha ungadabula iMenjangan National Marine Park, uhambe ngezinyawo, ungene phakathi kwezinhlanzi ezimibalabala, ubone izimfudu futhi ujabulele ukuthula okuningi ...
Faka ukuvakashelwa kwamasiko emadolobhaneni, i-gastronomy esuselwa kuzinhlanzi nasezinhlanzini zasolwandle, uzwe elinye isiko nsuku zonke noma uphume uye emabhaweni eKuta noma ujabulele ukuthula UCandidase. Iseluleko sami ukuthi ungahlanganisa ngqo le misebenzi eminingi ohambweni lwakho: ibhishi, ezemidlalo, ukuvakasha, ukuphumula, mhlawumbe i-yoga nokudla okuningi. Kanjani?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Bali » Yini ongayibona eBali